एउटा चोर उद्योगपतिको कथा — Motivatenews.Com
काठमाडौं – एउटा विद्यार्थीले प्रधानाध्यापकसंग भन्यो ।
सर सर ! हिंजो बुबाले मेरो जन्म दिनमा दिनु भएको महंगो घड़ी हरायो ।
प्रधानाध्यापक : कहाँबाट हरायौ ?
विद्यार्थी : यहीं कक्षा कोठाबाट हरायो सर !
प्रधानाध्यापक : कसरी हरायो ?
विद्यार्थी : म टिफिन टाइममा घडी यहीं टेबुलमा राखेर बाहिर गएको थिए, आउँदा टेबुलमा घडी छैन सर !
प्रधानाध्यापक : त्यसोभए यो समय भित्र त कक्षा कोठामा तिमीहरू बाहेक अरू कोही आएका छैनन् । तिमीहरू सबै लाइनमा लाग । र, सबैले आ-आफ्नो आँखामा पट्टी बाँध । सबैले त्यसै गरे । प्रधानाध्यापकले सबैको पकेट छामे। एउटाको पकेटमा घडी भेटियो र घडी बुझाए ।
चोरी गर्ने केटा डरायो । उसले अब मैले चोरेको कुरा कक्षाभरी फैलन्छ भन्ने त्रासमा रह्यो । एकदिन दुईदिन गर्दै समय वित्यो । तर, उक्त कुरा फैलिएन । उनीहरू कलेज जीवन सिध्याएर आआफ्नो कर्ममा लागे । चोर्ने केटा ठूलो उद्योगको मालिक बन्यो । एक दिन उसलाई पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रममा आफ्नो प्रधानाध्यापक पनि आएका थिए ।
केटा प्रधानाध्यापकसँग गएर प्रधानाध्यापकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भन्यो, ‘आज म जो स्थानमा छु सर हजुरकै देन हो । म हजुरको त्यो गुन कहिल्यै भुल्ने छैन ।’ प्रधानाध्यापक आश्चर्यमा पर्दै भने, ‘मैले त्यस्तो के गरें र ? तिमी यो सब के भन्दैछौ ?’ विद्यार्थीले भन्यो, ‘हजुरले त्यो दिन मैले चोरेको कुरा कसैलाई भनिदिनु भएन । र, म आज जिन्दा मात्र हैन, यो स्थानमा छु, त्योकुरा विद्यालयमा फैलिएको भए म त्यही दिन आत्महत्या गर्थें ।’
प्रधानाध्यापक आश्चर्यमा पर्दै भने, ‘त्यो केटा तिमी थियौ ?’ विद्यार्थी फेरी आश्चर्यमा पर्दै भन्यो, ‘सर ! हजुरले मलाई भुल्नु भयो ?’
प्रधानाध्यापक : मैले त्यो दिन तिमीहरूसँगै मेरो आँखामा पनि कालो पट्टीले बांधेको थिए । ताकि घडी लिने विद्यार्थी मैले नचिनु । म चाहन्थे कि मेरो विद्यार्थी मेरो नजरबाट नगिरोस् । यो कुरा सुनेर विद्यार्थी झन् आँखाभरी आँसु लिंदै प्रधानाध्यापकलाई अंगालेर रोयो ।
गल्ती कसबाट हुँदैन र ? तर, आज हामी अरूको गल्ती खोज्दै हिंड्छौं । बनावटी कथा बनाएर पनि अरूको चरित्र हत्या गर्छौं। जबकि हामी कोही गल्ती नगर्नेमा पर्दैनौं। सबैले सानो-ठूलो गल्ती गरि रहेका हुन्छौं । के कसैको गल्ती हामीले माफ़ गर्न सक्दैनौं ? गल्ती ढाक्न सक्दैनौं ? के सुध्रने मौका दिन सक्दैनौं ?